कान्छाले मात्र लुट्न पाउने ! - परिहास - नेपाल
गायक पशुपति शर्माले गाएको गीतमाथि कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरुले आपत्ति प्रकट गरे । त्यो आपत्तिमाथि पनि अरु धेरैले आपत्ति जनाए । मेरा तर्फबाट भने त्यो आपत्तिप्रति पूर्ण समर्थन रहेको जानकारी दिन चाहन्छु । एक कम्युनिस्ट भएको नाताले 'लुट्न सके लूट कान्छा' गीतप्रति आपत्ति हुनु स्वाभाविकै हो ।
किन स्वाभाविक हो, त्यो जान्नलाई कृपया एकपटक गीतको बोलमाथि ध्यान दिनुस् । त्यसमा भनिएको छ- 'लुट्न सके लूट कान्छा !' गीतको यो पहिलो लाइन नै विरोधयोग्य छ । किनभने, यसमा देश लुट्ने भए लूट भनेर केवल 'कान्छा' लाई मात्रै आह्वान गरिएको छ । जेठा, माइला, साइँला, काइँला, ठाइँला सबैलाई उपेक्षा गरिएको छ । यो कुरा मिलेन । के देश लुट्ने अधिकार केवल कान्छैलाई मात्रै छ ? जेठा, माइला, साइँला, काइँला, ठाइँलालाई देश लुट्ने अधिकार छैन ? आखिर यो देश त तमाम जेठा, माइला, साइँला, काइँला आदिको पनि हो । अतः देशलाई लुट्ने समान अधिकार उनीहरुलाई पनि हुनुपर्छ । तर गीतले कान्छालाई मात्र देश लुट्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ, यो गीतले केवल कान्छाको पक्षपोषण गरेर सम्पूर्ण जेठा, माइला, साइँला, काइँला, ठाइँलाहरुमाथि अन्याय गरेको छ । अन्यायको विरोध त गर्नैपर्छ ।
त्यसमाथि कम्युनिस्टको मुख्य सिद्धान्तै समानता हो । यो गीतले समानताको सिद्धान्तलाई पनि अपमान गरेको छ । सबैले समान रुपले देश लुट्न पाइन्छ भन्नुपर्ने ठाउामा कान्छाहरुले मात्रै लुट्न पाइन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । यो देश कान्छाको बाउको मात्र बिर्ता होइन । जेठा, माहिला, साइँला, काइँला, ठाइँलाहरुको पनि बाउको बिर्ता हो । आफ्ना बाउको बिर्ता लुट्ने अधिकार कान्छालाई जति छ, त्यति नै अधिकार जेठा, माइला, साइँला, काइँला, ठाइँलाहरुलाई पनि छ ।
यसरी ठाड्ठाडै कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेपछि त्यस्तो गीतको विरोध किन नगर्ने ?
यो पनि पढ्नुहोस् → गायक पशुपति शर्मा भन्छन् –'सरकारको भक्ति गाउन गीतको विरोध’